पाँचथरमा वृद्धको हत्या | Yangwarak Focus
Home Uncategorized पाँचथरमा वृद्धको हत्या
३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:४७
पाँचथर । फिदिम नगरपालिका–४ मा एक वृद्धको हत्या भएको छ। ७९ वर्षीय टेकबहादुर लिम्बूको हत्या भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) दानबहादुर थापाले घरमै हत्या भएको अवस्थामा लिम्बू फेला परेको बताए।
घटनास्थललाई शिल गरेर प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टोली अनुसन्धानमा जुटेको छ। मृतकको टाउको र शरीरमा गम्भीर चोट छ र जुन धारिलो हतियार प्रहारबाट भएको हुन सक्ने डीएसपी थापाले बताए।
घटनाको सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धानमा अनुसन्धान टोली जुटेको पनि उनको भनाइ छ।
मृतक लिम्बू सेवा निवृत्त भारतीय सैनिक हुन्। उनी ८४ वर्षीया श्रीमती कालिमायासँग बस्थे।
तर, उनी आइतबार बिहान मृत फेला परे। डीएसपी थापाले घटना मध्यरातमा भएको हुन सक्ने बताए।
घटनाको कारण भने खुलेको छैन। घटनामा संलग्नताबारे पनि खुलेको छैन।डीएसपी थापाका अनुसार मृतककी श्रीमती कालीमाया बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। त्यही भएर घटनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सकस परेको छ।
घटनाको अनुसन्धानमा सहजताको लागि मृतकका आफन्तहरूलाई पनि बोलाइएको उनले बताए।
यस्तै, संघीय प्रहरी कार्यालय धरानदेखि तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली बोलाइएको केन्द्रविन्दुलाई जानकारी दिए।
‘मृतकी श्रीमती बोल्न सक्ने स्थितिमा छैन, त्यही भएर हत्यामा को संलग्न थिए? कतिबेला हत्या भयो? यस्ता विवरण खुल्न सकेको छैन’, डीएसपी थापाले भने, ‘तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली बोलाएका छौं र त्यसपछि हत्या घटनाको अनुसन्धान अघि बढ्छ।’
वृद्धा दम्पतीको घर फिदिम नगरपालिका–४ को कुमालटारमा छ। आइतबार बिहान सासु–ससुरालाई भेट्न जाँदा ससुरा मृत अवस्थामा फेला परेपछि कान्छी बुहारी रीता लिम्बूले थाहा दिएको प्रहरीले जनाएको छ। साभार केन्द्रबिन्द डटकम
Previous articleनेपालको विश्वकप छनौट खेलको यात्रा टुंगियो
Next articleथर्पु सिभिल बैंकमा बढेको भिडभाड मंगलबार देखि कम होला त? अब हप्तामा चार दिन बैंक खुल्ने
याङ्वरक फोकस - ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:४७
सुमन सहयात्री - ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:४७
Yangwarak Focus (Amir) - ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:४७